Galmudug oo Xarunta Shirkoole u diyaarisay Guddiga Doorashooyinka (SAWIRRO) – AfmoNews
Galmudug oo Xarunta Shirkoole u diyaarisay Guddiga Doorashooyinka (SAWIRRO)
Maamulka Galmudug ayaa Xarunta Shirkoole ee Magaalada Dhuusamareeb u diyaariyay in ay ku hawlgalaan Guddiga Doorashooyinka, ee lagu wado in ay soo xulaan Xildhibaanada Baarlamaanka, kuwooda ka imaanaya Galmudug.
Xarunta Shirkoole waxaa hadda ku shaqeeya Baarlamaanka Galmudug, waxaana amnigeeda ilaaliya Ciidamada Nabad Suggida, oo Taliye uu u yahay Qooje Yare.
Guddiga Doorashooyinka ayaa waxaa dhawaan la fillayaa in ay ku laabtaan Magaalada Dhuusamareeb, xilli toddobaadyadii la soo dhaafay ay tababar la xiriira maamulidda doorashooyinka u jooggeen Magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Kuxigeenka Galmudug, Cali Daahir Ciid ayaa kormeeray Dhismaha Shirkoole, iyadoo soo indha indheeyay qaybta loogu talagalay inay deggaan Guddiga Doorashooyinka.
Madaxweyne Kuxigeenka ayaa warbixin la xiriirta amniga dhismahaasi ka dhageystay Saraakiisha Ciidamada Nabad Suggida ee amnigeeda gacanta ku haya.
Xarunta Shirkoole waxaa si joogta ahi uga hawlgeli doono Guddiga Doorashooyinka Galmudug iyo hawlwadeenadooda, waxaana qaabka ay shaqada u socoto soo kormeeri doono Guddiga Doorashooyinka ee heer federaal.